Andry Rajoelina : Naka mpanolontsaina mpiaro « homo » -
AccueilRaharaham-pirenenaAndry Rajoelina : Naka mpanolontsaina mpiaro « homo »
29/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Azo ambara ho fandresena goavana azon’ireo antsoina amin’ny teny vahiny hoe « homosexuel » ny fisehoana nataon’i Andry Rajoelina tamin’ny 26 Janoary lasa teo tany Frantsa. Isan’ireo handrafitra ny ekipan’ity lehiben’ny mpanongam-panjakana ity mantsy ilay solombavambahoaka teo aloha antsoina hoe Jean-François Mancel, nandany ilay tolo-dalana mampanaiky ny mariazy eo amin’ny lahy sy lahy na vavy sy vavy. Niady mafy io lalàna mampanaiky ny fanambadian’ny lahy sy lahy na vavy sy vavy io mihitsy ity mpanolontsainan’i Andry Rajoelina naseho vahoaka tany Frantsa farany teo ity. Io resaka « homosexualité » io angamba ilay fanovàna nampanantenainy teny amin’ny kianjan’ny 13 May, nanaovan’ny vahoaka sorona ny ainy teny Ambohitsorohitra ny 7 Febroary 2009.
Manontany tena avokoa ny mpanara-baovao taorian’iny 26 Janoary 2018 iny: “inona loatra no nahatonga izao fiarahan’i Andry Rajoelina amin’ity solombavambahoaka, Jean-Francois Mancel, mpandàla ny fanambadian’ny lahy sy lahy na vavy sy vavy ity izao? ».
Vao tamin’ny alahady faha-21 Janoary lasa teo no nanentanan’ny filohan’ny FJKM ny mpino kristiana mba hametraka ny fitokisany amina olona matahotra an’Andriamanitra. Ny Fiangonana rehetra maneran-tany dia mitsipaka marindrano izany fanambadian’ny lahy sy lahy na vavy sy vavy izany satria mifanohitra tanteraka amin’ny fivavahana kristiana izany ary endrika tsy fahatahorana an’Andriamanitra nahary izao tontolo izao izay namaritra ny fanambadiana ho amin’ny lahy sy vavy irery ihany.
Fahatairana niharo fahagagana ny an’ny mpanara-baovao raha nahita an’i Jean-François Mancel, anisan’ireo mpanolontsainan’i Andry Rajoelina ary raha ny fantatra aza dia ity solombavambahoaka teo aloha ity no tena anisan’ny akaiky indrindra ny filohan’ny HAT teo aloha amin’ireo vahiny maro nalainy ho mpanolontsainany. Hatramin’ny androany anefa aloha dia tsy mbola manaiky izany « homosexualité » izany ny fiaraha-monina Malagasy sy ny Fiangonana ary heverina sy antenaina fa tsy hanaiky ny hametrahana lalàna manome alàlana ny fanambadian’izy ireo.
Amidin-dRajoelina mialohan’ny fifidianana ?
Ny 26 janoary 2018 teo no nitondran’i Andry Rajoelina ny antsoina hoe IEM, na ny fahavononana hanarina an’i Madagasikara izay tao Paris renivohitr’i Frantsa no nanatanterahany izany, izay marihina eto am-boalohany fa vitsy tena vitsy an’isa ny gasy tonga nanatrika izany hoe fampivoarana ny firenen’izy ireo izany. Noho izany , dia tsy ho resahina intsony angamba hoe natao ho an’iza ity hoe fanarenana ity, fa dia varotra tsotr’izao no azo ilazana ny zava-misy. Satria tahaka ny tsena rehetra dia afaka atao ny mitondra ny vokatra aty Madagasikara any ivelany, ka izay vonona hividy sy efa fantatra hoe hividy dia antsoina amin’ ny fampahafantarana ny entana amidy. Tsy misy valaka amin’ izany ity zava- nitranga tany Parisy ity ny zoma lasa teo, satria ny tompon’entana iray ihany dia izany Andry Rajoelina izany , saingy ny mpividy kosa dia vahiny maro izay tonga te hahalala ny vokatra. Izany hoe tahaka ny andramena izay namidiny tany ivelany nandritra ny fotoanan’ny Tetezamita.
Mba entina hanaporofoana izany, dia indro ampahafantarina anao ny olona tonga nanatrika ny fampahafantarana ny vokatra, araka ny anarana izay navoakan’ ny gazety amin’ ny alalan’ ny aterneto MADAGATE, izay manohana fatratra ny rain’ny Tetezamita dimy taona. Ny voalohany dia ireo parlemantera roa izay nandray anjara feno tamin’ny famelabelarana ny vokatra, ary hoentina aminao voalohany ilay antsoina hoe David Douillet, izay rehefa natao ny fanadihadiana dia tahaka izao ny zava-bitany. Zava-nitranga amin’ ity volana janoary ity, izay mandeha ny fanadihadiana amin’izao foana dia ny fanatanterahana fanambaram-panananah osoka, satria dia misy ireo fananana izay tsy nanatanterahana fanambarana. Antontan-taratasy faharoa izay eo ambony lohan’ i David Douillet araka ny nambaran’ ny gazety frantsay “la liberation” ny taona roa arivo, dia ny fanenjehana azy noho ny fanodinkodinana fananam-bahoaka. Parlemantera faharoa navitrika nandritra ny famelabelarana ihany koa dia i Mancel Jean-François, izay tsy iza fa dia mbola nenjehina ihany koa amin’ ny resaka fanodinkodinana fananam-bahoaka, izay fantatra fa naharitra ela dia ela ny fanadihadiana izay natao taminy.
Araka ny anarana izay notaterin’ ny MADAGATE fa anisan’ny nandray anjara tamin’ity hetsika famarotana an’ i Madagasikara ity, dia taterina tahaka izao, izay marihina fa toa mpandraharaha tsy fantatra mazava avokoa. Lamothe Laurent, praiminisitr’ i Haïti teo aloha sady mpandraharaha ihany koa, Lahrichi Hindi Benjelloun filoha tale jeneralin’ny vondrona marocain, Mersal Pesca; Zafar Jalil izay talen’ny vondrona General Electric. Iza avy àry ireo olona ireo, moa va tsy mpandraharaha mampiahiahy avokoa raha tsy hiresaka izany hoe Marocain izany fotsiny ho an’ ny teto Madagasikara, lafo ambongadiny sahady Madagasikara. Hapetraka àry eto ny fanontaniana hoe raha fanarenana no resahina, aiza ireo vonona hanampy ny mpandraharaha malagasy hanorina orinasa, tsy maintsy vahiny foana ihany koa ve no hampiasa ny volany eto Madagasikara fa tsy maha vita ve ny Malagasy raha toa ka ampiana .
Gadra sy voaroba tamin’ny 2009 : Nolatsain’i Marc Ravalomanana